Smashwords – Awam Ngqo! – a book by Sindiwe Magona
Ingaba abantu ababini abaza kutshata bayazi na ukuba kufuneka imvisiswano yabo iyinto ehamba njani nesekwe phezu kwamigaqo mini na? Khona, ingaba isekho nje into esisisulu? USipho yena uthi uza kulandela igama lakhe kwaye imnandi kunene ke le nto kuba isibonisa into yokuba abantwana abazizidalwa bangazizipho ezikhulu, izipho abazali abazinikwe nguMdali. More
Ingaba abantu ababini abaza kutshata bayazi na ukuba kufuneka imvisiswano yabo iyinto ehamba njani nesekwe phezu kwamigaqo mini na? Khona, ingaba isekho nje into esisisulu? USipho yena uthi uza kulandela igama lakhe kwaye imnandi kunene ke le nto kuba isibonisa into yokuba abantwana abazizidalwa bangazizipho ezikhulu, izipho abazali abazinikwe nguMdali. Ingaba siyazi na ukuba abantwana anaziinkedama bona bacinga njani na ngabazali babo abangasekhoyo?
Mandingafinci, mfundi, ngena ngaphakathi kule ncwadi nawe uzirhabulele kula mabalana abhalelwe ukuphuhlisa ezi ngongoma nokunye yaye evula ingqondo. Rhabula, mhlawumbi ungaqubisana nalo nokuba linye elinga libaliselwa wena lo okanye libaliswa nguwe ngqo!
Tags: faith grief responsibility south africa challenges defiance xhosa isixhosa sindiwe magona